Chronicle of Life ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel May 05, 2017
အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းသစ်လေးကတော့ 2016 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တယ့် Chinese Drama , Romance ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါ ...
ငယ်ငယ်က မြဝတီ မှာ ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ချို့လို အရှေ့ကထိပ်ပြောင် နောက်က ကျစ်ဆံမြီးအရှည်ကြီးနဲ့ မန်ခြူး ဇာတ်လမ်းပုံကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Main Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ - Lau Hawick ( မင်းသမီး Yang Mi ၏ ခင်ပွန်း ) , Vin Zhang (3Lives ထဲက သရဲဘုရင် လီကျင့် ) နှင့် Zheng Shaung ( Love O2O ထဲက မင်းသမီးလေး ဝေဝေ ) တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ မန်ခြူးခေတ်ကို နောက်ကျောထားပြီး Dram အသားပေး ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ... Drama အသားပေးဆိုပေမဲ့ မန်ခြူးခေတ်ရဲ့ အငွေ့အသက် နန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ အတူတူ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - လျန်﻿အာ က မြို့စားမင်းရဲ့ သမီးဖြစ်﻿ပြီး သူမရဲ့﻿မွေး﻿နေ့မှာ ... ဘုရင့်﻿ကို ပုန်﻿ကန်﻿မှု﻿ကြောင့်﻿ ဘုရင့်﻿အမိန့်﻿နဲ့ တစ်﻿မိသားစုလုံးအသတ်﻿ခံခဲ့ရတယ် ... ကံ﻿ကောင်း﻿ထောက်﻿မစွာနဲ့ သူမတစ်﻿﻿ယောက်﻿ထဲထွက်﻿﻿ပြေးလွှတ်﻿﻿မြှောက်﻿သွားပြီး ... ဦရီး﻿တော်﻿ရှိရာဆီထွက်﻿လာခဲ့ပါတယ်﻿ ...
လမ်းမှာလဲ လူဆိုး﻿တွေဖမ်းပြီး﻿ ရောင်းစားဖို့လုပ်﻿ရာက﻿နေ လုပ်﻿ကြံသူ﻿တွေ﻿ရန်﻿က ﻿ရှောင်﻿﻿ပြေးလာတဲ့ဘုရငိနဲ့﻿တွေ့ခဲ့ပါတယ် ... ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ဘုရင်﻿ကိုပြုစု﻿ပေးခဲ့တယ်﻿ ... ဘုရင်﻿ကိုဘုရင်﻿မှန်းမသိ﻿ပေမဲ့ အစ်ကိုတစ်﻿﻿ယောက်﻿လို သံ﻿ယောဇဉ်﻿﻿တွယ်﻿ခဲ့ပြီး နောက်နေ့ပြန်ဆုံဖို့ ချိန်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် ...
ထို့နောက် လျန်အာ တစ်ယောက် ဦးရီးတော် ဆီသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး ... ဦးရီးတော်ရဲ့ မွေးစားသားဖြစ်သူက လုပ်ကြံလို့ လျန်အာ တစ်ယောက် အတိတ်မေ့လျော့သွားခဲ့ပါတယ် ... အဲ့အချိန်မှာ ဦးရီးတော်ရဲ့ သားအရင်းဖြစ်သူ ရွန်ယု က ကယ်တင်ပြီးနောက် လျန်အာ ကို အစေခံအဖြစ်ထားလိုက်ကြပါတယ် ...
ထို့နောက် လျန်အာ နှင့် ရွန်ယု တို့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ် ... အဲ့အချိန်တွေထဲမှာပဲ တချိန်က ဂူတစ်ဂူထဲမှာ လျန်အာ ရဲ့ ပြုစုမှုကို ခံယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုရင်လေးကလဲ လျန်အာ ကို ၈ နှစ်လုံးလုံး လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ် ...
လျန်အာ , ရွန်ယု နှင့် ဘုရင်လေး သူတို့ရဲ့ ၃ ပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ...
Rating အရ Viki မှာ 9.1 နှင့် MyDramaList မှာ 7.6/10 အသီးသီး ရရှိထားတာကြောင့် rating မြင့် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဆိုလဲ မှားမယ်မထင်ပါဘူး ...
အပိုုင်းရေ စုစုပေါင်း 37 ပိုင်း ပါဝင်ပြီး တပတ်ကို ၄ ပိုင်း , တစ်ခါတင် ၂ ပိုင်း နှင့် တစ်ပတ် နှစ်ရက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Translator - Sakura Hene
Encoder - Anonymous X
Episode6( Openload Link )
China Drama Romance
Labels: China Drama Romance
hlahlayee May 23, 2017 at 9:03 PM
Myo Myo August 23, 2017 at 4:57 AM
please add more episodes!!!